Rasmi: Filimka Badla oo Isniintiisa kowaad si wacan isku celiyay kani HIT ayuu noqonayaa! – Filimside.net
Rasmi: Filimka Badla oo Isniintiisa kowaad si wacan isku celiyay kani HIT ayuu noqonayaa!
Superstar Amitabh Bachchan iyo Taapsee Pannu filimkooda Badla ma uusan noqonin mid Sabti iyo Axad kaliya reer magaalka soo jiito sidoo kalena shalay oo Isniin ahayd maalin shaqo ganacsi adag ayuu sameeyay asigoo si wacan isku celiyay wuxuuna keenay 3.75 Crore (Trade Figure) asigoo sameeyay 25% hoos u dhac marka lala bar bar dhigo Jimcadii lacagaha uu keenay.
Badla haatan mudo afar maalmood ah wuxuu kusoo xareeyay 26.50 Crore (Trade Figure) wuxuuna ganacsi adag ka sameenayaa magaalooyinka Mumbai, Pune iyo Bangalore taasi oo ka caawin doonto darajada HIT dhameestiran inuu gaaro sidoo kalena labada todobaad nagu soo foo leh tiyaatarada baaqi kusii ahaado.
Fadlan hoos kaga bogo ganacsiga uu sameeyay filimka Badla afartiisa maalmood ugu horeyso soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI) soo daabacday:
Wadarta Guud – 26.50 Crore (Trade Figure)
Waxaa muuqato filimka Badla inuu todobaadkiisa kowaad keeni doono 36 Crore ilaa 37 Crore ganacsi u dhaxeeyo waana lacag adag sidoo kalena hubanti ahaan mashruucaan iska yar miisaaniyadiisa cimri ahaantiisa 50 Crore wuu gaari doonaa kani waa HIT la hubo!
Dhinaca kale Badla suuqyada caalamka xitaa soo dhaweyn wanaagsan ayuu ka helay asigoo keenay $1.71m (11.96 Crore) sedexdiisa maalmood ugu horeesay. wuxuuna ganacsiga ugu weyn ka sameeyay UAE/Gulf asigoo ka keenay $680k halka USA/Canada uu ka keenay $586k.